IINGCAMANGO EZI-27 ZEGUMBI LOKUHLAMBELA ELILUNGILEYO - UYILO LWEGUMBI LOKUHLAMBELA
Eyona uyilo Lwegumbi Lokuhlambela Iingcamango ezi-27 zeGumbi lokuhlambela eliLungileyo
Iingcamango ezi-27 zeGumbi lokuhlambela eliLungileyo
Wamkelekile kwigalari yethu yezimvo zegumbi lokuhlambela. I-chandelier yokuhlambela inokuzisa imvakalelo yokuphola kwindawo yakho kwaye ikuncede wenze indawo yokuphumla yokuphumla. Kweli phepha legalari sabelana ngemifanekiso entle yamagumbi okuhlambela anempahla ephezulu kunye nokuhonjiswa kunye neekhandlela ezintle.
Ngelixa ii-chandeliers zihlala zibonwa kwiindawo ezinje ngamagumbi okudlela kunye neendlela zokungena banokongeza ubuntu obuninzi kwindawo yokuhlambela. Iikhandlela ziyafana nezibane ezijingayo kuba zihlala zenziwe ngezinto ezifanayo kwaye zisebenzisa uhlobo olufanayo lwezibane. Nangona kunjalo, ii-chandeliers zinendawo yokulungiselela i-branched ngelixa i-pendants ixhonywe ngetyathanga, okanye intambo.
Kumfanekiso ongentla kukho ikhandlela entle yekristale ehambelana neekristale zodonga. I-suite ye-master master iye yapolisha i-travertine flooring, ibhafu enkulu yokuntywila, isinki yokuntywila kabini kunye nekhabhathi emhlophe, kunye neshawa enkulu yeglasi enesilingi. Skrolela ngezantsi ukuze ufumane ezinye izimvo zekhandela.
Iimbombo zegumbi lokuhlambela
Iindidi ezidumileyo zeekhandlela:
Zesintu-Zintle ngesitayile esisesikweni sisebenzisa ukuskrola okuneenkcukacha kunye nezinto ezisemgangathweni ophezulu.
I-Tiered-Yiba nokukhanya kwinqanaba ngalinye. Ke ngoko uninzi lwamanqanaba olu hlobo lukhulu kakhulu. I-chandelier edibeneyo inokuza nayiphi na isitayela ukusuka kwixesha langoku / langoku ukuya kwendabuko.
Encinci -Ezi zinto zilula zokukhanya lukhetho oludumileyo kwigumbi lokuhlambela njengoko ubungakanani bazo obuncinci zibenza zilungele indawo esondeleyo. Ngokufana nokulungiswa kobukhulu obugcweleyo, ii-chandeliers ezincinci zihlala zisetyenziswa kumagumbi okulala kunye nakwindawo yokugcina izinto ukuphucula indawo kunye nokubonelela ngesimbo nobuhle.
ICrystal-Glamorous yindlela entle yokwenza isishwankathelo sokubonakala kwekhandlela le-crystal. Zingabiza kakhulu ukuba zakhiwe kusetyenziswa iikristali zokwenyani. Zijonge ngamehlo kwaye zikhazimla njengokukhanya kubonakalisa ikristale nganye. Iikristale zeekristale ziyamangalisa ngokwenza i-aura yothando kwigumbi.
ubungakanani obuqhelekileyo bekhitshi kwisiqithi
Igubu-Elinomfanekiso omnye okanye uninzi lwezibane, isibane sedrum sinomthunzi ojikeleze ukukhanya konke okanye yonke into. Ziyafana ngenkangeleko yokukhanya okwesandi.
Iipaneli zala maxesha nezangoku - I-Sleek kunye ne-stylish ngamagama amabini achaza i-chandelier yangoku / yanamhlanje. Ngemigca ecocekileyo, imiphetho ethe nkqo kunye nezixhobo zangoku ezi zinto zilungisiweyo zinokongeza ubuqaqawuli bakho kwindawo yangasese.
I-Rustic -Ngesitayile esingaqhelekanga ezi ntlobo zokukhanya zikholisa ukuba noxinzelelo okanye ukugqitywa kugqityiwe. Banokuba nezinto zerustic ezinje ngamasebe, amasebe emithi, iimpondo zezilwanyana kunye nezikhewu zakudala kunye neempawu.
Utshintsho -Umxube wezangoku kunye nezesintu, itshaneli yotshintsho iyakwazi ukuziqhelanisa kwaye ihlala ihambelana nayo nayiphi na indlela yokuhombisa okanye yoyilo.
Le ndlu yokuhlambela entle ine-chandelier emangalisa kunye nebhafu emhlophe yokuhlambela ejonga kwiminyango etyibilikayo kwindawo ye-balcony yangaphandle.
Le ndlu yokuhlambela yendabuko ine-chandelier yesitayile esihonjiswe kwindawo enkulu yokuhlambela, isibane esakhelweyo kwisibuko sehlabathi, ishawa yemvula yeglasi, kunye nezinto ezilambathayo zomthi omnyama.
Esi sikhombisi sangoku sisitayile sedrama esidityaniswa kakuhle nembonakalo yanamhlanje kunye nobunkunkqele bendawo yokuhlambela efestileni ehleli ngaphandle, kunye nomgangatho ongwevu ongwevu.
Eli gumbi lokuhlambela likhazimlayo liyaphuculwa nge-chandelier encinci eneklasi yeglasi yekristale, iindonga ezimfusa ezimfusa, umbala omnyama weentyatyambo, izinto ze-chrome, itafile yesilivere, ishawa yethayile yemabhile, kunye nemabhile enkulu efakwe ibhafu.
Le chandelier yanamhlanje ixhonyiwe ngaphezulu kwebhafu enkulu ebiyelweyo enegumbi elijikeleziweyo elinemifanekiso yeefestile ezijikeleze isithuba kwaye inikezela umbono okhethekileyo wekhosi yegolide kunye nentaba ekufuphi.
Igumbi lokuhlambela eline-marble emhlophe, i-herringbone yesitayile somgangatho, ibhafu enkulu evaliweyo, ishawa enkulu kunye neprofayile esezantsi yeeseli ezineeseti ezimbini zoxande zeglasi.
Igumbi lokuhlambela elikhanyayo nelikhanyayo kunye nebhafu evaliweyo, imarble slab engqonge, imarble tile backsplash kunye negolide mini chandelier.
Le ndlu yokuhlambela i-whimsical kwaye inemibala kunye nokukhetha kwayo ipeyinti eluhlaza ye-aqua kwinto engento, isipili kunye nodonga lwe-mosaic tile eludongeni. I-chandelier encinci inceda ukukhanyisa imeko nangakumbi kwaye ijongeka imeme imisiwe ngaphezulu kwebhafu yeenyawo.
Esi sikhanyisi sangoku sineebhola ezinkulu zeglasi kwipateni ejonge phezulu emiswe ngamatyathanga kwaye ibonelela ngokukhanya okufudumeleyo kwindawo yangasese. Udonga olwenziwe mnyama eludongeni ezindongeni zikwanceda ukubonelela ngokukhanya okufudumeleyo kunye nokuzisa ukukhanya okufunekayo kwindawo yokuntywila.
Le nook yebhafu yethayile yenziwa ngakumbi nangakumbi ngokumenywa kukukhanya okuthambileyo kwekhandlela elincinci ukuseta imood. Ifestile ethandwayo izisa ukukhanya kwendalo kwaye ibonelela ngasese xa kufuneka njalo.
I-rustic kunye ne-ornate etshisiweyo ye-chandelier ene-crystals ejingayo ibonakala iyamangalisa ngaphezu kweli gumbi lokuhlambela eliqhelekileyo.
Amacangci amabini amancinci aneglasi epinki abonelela ngendawo yokuhlambela yesiqhelo njengokuziva okumnandi njengoko iindwendwe zijonge umbono wolwandle omangalisayo.
Isitayile segubu lesitayile esine-chrome efanelekileyo kukuchukumisa kakhulu le ndawo yokuhlambela i-mosaic.
Ukugqithisa ngenye indlela yokuchaza le ndawo yokuhlambela emangalisayo. I-chandelier enkulu yekristale iyamangalisa ngomsebenzi wayo wokuxhoma weglasi weentsimbi ezinzima.
I-chandelier encinci yobhedu ijongeka intle kule ndawo yokuhlambela ihonjiswe kakuhle, igqityiwe ngeentsika ezibanzi, amanyathelo amakhulu e-tile, ifestile yomfanekiso kunye nesilingi efakwe ipeyinti enamafu apeyintiweyo eludongeni.
Le ndawo yokuhlambela ebutofotofo iyamema kwaye inobungangamsha kunye nebhafu yayo yenyawo eneenyawo kunye nekhephu entle yekristale. Iingcamango zekamelo lokuhlambela ezinezibane eziphezulu zokukhanyisa zenza ukubonakala okungapheliyo kwaye ngokuqinisekileyo ziyanceda xa uthengisa ikhaya kunye nokonwaba kwakho kwemihla ngemihla.
Isitayile sendabuko sokwenyusa ngokwenyani imeko yokuzihombisa kule ndawo yokuhlambela kwaye sifezekisa izinto ezintathu ezenzelwe udonga kunye nezixhobo zesilivere.
Le chandelier yefreyimu yocingo incinci kwaye intekenteke kwaye ijongeka intle kule ndawo yokuhlambela ngethayile emhlophe ethambileyo kunye nekhabhathi zekrimu.
I-chandelier yanamhlanje yedrama enemigangatho emithathu okanye iglasi prism yokubonelela ngokukhanya okuninzi okuqaqambileyo.
Le ndlu yokuhlambela intle ishushu kwaye iyamema ngokukhetha kwabo iiorenji ezifudumeleyo kunye nemibala ebomvu enendawo yomlilo wekona, ukugqitywa kweenkuni zendalo kunye neefestile ezinde ezikhokelela kwisilingi esivaliweyo. I-chandelier yeglasi exhonywe ngokumangalisayo iyamangalisa kwaye iyahambelana nezinto ezimbini ezongeziweyo zodonga ezifakwe kwi-chandelier ukuzalisa igumbi ngokukhanya okuthambileyo.
Le chandelier ye-rustic ibekwe ngokugqibeleleyo ngaphezulu kwebhafu kwaye yenziwe yimbonakalo yewindow enkulu.
I-chandelier yobhedu etshisiweyo kunye neentambo zokuxhoma i-crystal kunye ne-crystal enkulu ekupheleni kwayo yinto ekhangelekayo yendawo yokuhlambela yaseMeditera.
Indawo yokulala evulekileyo yothando yenziwa yiglasi yekhandlela enemicu entsonkothileyo kunye nokukhanya kobhedu.
Ukukhanya okufudumeleyo kule chandelier incinci kuyothuthuzela kwaye kunokunconywa kukukhanya okufudumeleyo kokukhanya kwekhandlela ukuzisa imeko ezolileyo yendawo noxolo.
Le ndawo yokuhlambela yase-Asiya inefuthe lokukhanya kwendalo kunye nekona yalo yomgangatho ukuya kwiifestile zesilingi. I-chandelier encinci ime ngokuthe ngqo ngaphezulu kwebhafu kwaye inceda kakhulu ngaphezulu kokuziva kwendawo enjenge-spa.
Le ndlu yokuhlambela intle inamagumbi amabini ngelixa ifunxwa kwibhafu enkulu, inqabile kwindawo yokuhlambela, okanye iphumle ebhedini yosuku. Isiphatho esimbejembeje esenziwe ngetsimbi emnyama emnyama sonyusa imvakalelo yokunethezeka kunye nokuzonwabisa.
Igumbi lokuhlambela elinegumbi onokulithanda:
Amagumbi okuhlambela anezibane ezihonjisiweyo - Iingcamango zoyilo lwegumbi lokuhlambela - Uyilo oluMnyama oluMhlophe kunye noMhlophe - I-25 entle yoyilo lwegumbi lokuhlambela elimhlophe - Iingcamango zokuhlambela ngegumbi lokuhlambela
yenza isaphetha ngeribhoni
elide kangakanani ukuthandana ngaphambi komtshato kwi 50s yakho
Isoftware yoyilo lwekhabhinethi yasimahla
Isinxibo somtshato elwandle kwiindwendwe zabasetyhini
izipho ezinkulu zekrisimesi zomfazi
isimemo somtshato esishicilelweyo simahla